सिङ्गल चर्चित गायक राजेश पायल रार्इ बिबाह नगर्नुको भेद खुल्यो, तथ्य यसरी भयो छताछुल्ल « Janaboli
सिङ्गल चर्चित गायक राजेश पायल रार्इ बिबाह नगर्नुको भेद खुल्यो, तथ्य यसरी भयो छताछुल्ल
काठमाडौँ । गायक राजेश पायल राईलाई सबैले बिबाह कहिले भनेर प्रश्न गरेर हैरान पारेका थिए । नेपाली गीत संङ्गितको क्षेत्रमा रार्इ इज किङ नामले प्रख्यात रार्इले बिबाह कहिले भनेर प्रश्न गरीरहने करोडौलाई एकैसाथ जवाफ दिए । सोमबार आफ्ना लाखौँ फ्यानका लागि मायालु सार्वजनिक गरेपछि बिबाह नगर्नुको भेद खुलेको हो । उनकै शब्द सापटी लिने हो भने उनकी मायालुको नाम सन्ध्या चाम्लिङ रार्इ हो । सन्ध्याको अंगालोमा बाँधीएका राजेशले क्यामेरालार्इ हेर्दै मायालुलार्इ चुम्बन गर्ने खोजे जस्तो उनले सार्वजनिक गरेको फोटोले जनाउँदछ । उनले सन्ध्या आफ्नो मायालु भएको पनि बताएका छन् ।
राजेशका सयौँ फ्यानहरूले अहिले उनलार्इ बधार्इ दिर्इ रहेका छन् । सन्ध्या को हुन् ? के गर्छिन ? राजेसँग उनको सम्बन्ध कस्तो हो भन्ने तमाम जिज्ञासा यथावत रहे पनि उनी राजेशको मायालु भएको राजेशले नै सार्वजनिक गरेका छन् ।
यो प्रशंग आइरहेका बेला उता सर्वाधिक चर्चित नायिका रेखा थापाले दुर्गमबाट नायिका खोजेकी छन् । भेरी नगरपालिका–१ कालेगाउँकी १५ वर्षीया कमला वली सामान्य किसान परिवारकी चेली हुन् । शिव व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय कालेगाउँबाट यसै वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएकी उनलाई न कुनै गीत संगीत वा नाचको अनुभव छ, न त अभिनयको ज्ञान । उनको फिल्मी दुनियाँमा करिअर बनाउने सपनासमेत थिएन । तर कमलालाई ‘मालिका’ फिल्मको मुख्य भूमिका गर्ने अभिनेत्रीमा छनोट हुने अवसर प्राप्त भएको छ । कमलालाई चर्चित अभिनेत्री रेखा थापा र ‘जीवन रूपान्तरण’ का विश्व प्रशिक्षक नरबहादुर कार्कीले बालविवाहको विषयवस्तु समेटेर बनाउन लागेको फिल्म ‘मालिका’ को मुख्य अभिनेत्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको हो ।
बालविवाहविरुद्धको देशव्यापी अभियान अन्तर्गत अभिनेत्री रेखा र अभियन्ता कार्कीले निर्माण गर्न लागेको ठूलो पर्दाको फिल्मका लागि कलाकार खोज्ने क्रममा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका १, कालेगाउँमा कमला फेला परेकी हुन् । उक्त फिल्मका लागि ग्रामीण क्षेत्रबाटै मुख्य पात्र बनाउने उद्देश्यका साथ कलाकार खोज्ने क्रममा जाजरकोटको कालेगाउँमा अध्ययनमा व्यस्त रहेकी कमलासँग जीवन रूपान्तरणका प्रशिक्षक कार्कीको पहिलो भेट भएको थियो । त्यपछि मालिका फिल्मका कार्यकारी निर्मातासमेत रहेका कार्कीको नजरमा उनी परिन् । गोरी, होचो कद, निधारमा खत अनि पातलो जीउडाल भएकी १५ वर्षीया कमलालाई खोजेको पात्र पाउँदा उनी र उनका अभिभावकसँग कलाकार बनाउने बारे कुराकानी भएको कार्कीले बताए । कहिलेकाहीं टेलिभिजनमा मात्र फिल्म हेरेकी कुनै पनि अभिनय नगरेकी कमलालाई एकै पटक ठूलो पर्दाको फिल्म खेल्दा कस्तो होला भनेर कौतुहल लागेको छ । उनी फिल्ममा अभिनय गर्नकै लागि गत साता बिहीबार काठमाडौंतर्फ लागेकी छन् । एक महिना अभिनयको तालिम लिएपछि उनको फिल्म सुटिङ सुरु हुनेछ ।
सामाजिक कुरीतिका रूपमा व्याप्त बालविवाहलाई अभिनयको माध्यमबाट हटाउने अभियानमा लाग्ने अठोट गरेको कमलाले बताइन् । सामाजिक कुसंस्कृतिविरुद्धको ठूला पर्दाको फिल्मको हिरोइन बन्ने अवसर प्राप्त हुँदा निकै खुसी भएको उनले बताइन् । घरपरिवार र समाजले बालविवाह गर्न दबाब दिइरहेका बेला कमलाले त्यसविरुद्ध प्रतिवाद गरेर बालविवाहको चपेटामा परेका बालिकाका लागि अभिनयमार्फत सामाजिक दबाब दिएर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आशा लिएको नायिका रेखा थापाले बताइन् । नेपालबाट बालविवाह मुक्त गरी छोरीका लागि स्वर्णिम नेपाल बनाउने देशव्यापी अभियानमा लागेका अभिनेत्री रेखा र जीवन रूपान्तरणका प्रशिक्षक कार्कीले आम रूपमा मुलुकलाई नै बालविवाहविरुद्ध सहभागी गराउन ‘मालिका’ फिल्म निर्माण गर्न लागेको बताएका छन् । फिल्ममा मालिकाको भूमिकामा रेखा स्वयं हुनेछिन् भने ‘जया’ को भूमिकामा कमला देखिनेछन् । कमला सानै उमेरमा घरपरिवार र आफन्तले जबर्जस्ती गर्न लागेको विवाह नगरी भागेर काठमाडौं जान्छिन् । सबैतिर उनीमाथि दुव्र्यवहार हुन थालेपछि उनकी साथी बन्न आइपुग्छिन् रेखा थापा । रेखाले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाविरुद्ध लड्न सिकाउँदै फेरि जहाँबाट उनी विवाहको मण्डप छोडेर भागेकी हुन् त्यही गएर बालविवाह लगायतका हिंसाविरुद्ध सक्रिय हुने कथाको विषयवस्तु रहेको छ ।
नेपालका अन्य क्षेत्रको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको दर बढी रहेकोले जाजरकोटबाटै फिल्मको मुख्य पात्र खोजिएको नायिका रेखाले बताइन् । छोरीका निम्ति स्वर्णिम नेपाल बनाउने हाम्रो अभियानमा सारा नेपालीलाई सहभागी गराउन यो फिल्म बनाउन लागेको रेखाले बताइन् । ‘यो फिल्म निर्माणको उद्देश्य ३ करोड नेपालीको सपनासँग जोडिएको छ त्यसैले सबैको साथ पाउने छौं,’ रेखाले भनिन् । रेखा फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण हुने उक्त फिल्म जाजरकोटका विभिन्न स्थान, बाँके, काठमाडौंलगायतका स्थानमा छायांकन हुनेछ ।
फिल्मको निर्देशन सम्झना उप्रेतीले गर्ने छिन् भने संगीत सुरेश अधिकारीले दिनेछन् । जाजरकोटमा उमेर नपुग्दै ६५ प्रतिशत बालबालिकाको बिहे हुने गरेको छ । बालविवाह दर उच्च रहेको जाजरकोट लगायतका कर्णालीका जिल्लाको जीवनशैली, त्यहाँ उत्पन्न समस्या समाधानका लागि महिलाले खेल्नुपर्ने सशक्त भूमिका र समस्याका कुरालाई फिल्मको विषयवस्तु बनाएको फिल्मका कार्यकारी निर्माता कार्कीले बतए ।
छक्कापञ्जा–३ घटस्थापनाबाट प्रदर्शनमा आउने : कस्तो छ भन्ने बारे दिपकराजले पहिलोपटक खोले रहस्य !
काठमाडौ । चलचित्र ‘छक्कापञ्जा–३’ असोज २४ गते घटस्थापनाको दिनबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ । आज
एक्लैं हिडिरहेकी केटी जिस्काउन खोज्दा जे भयो !
आजमगढ (उत्तर प्रदेश) । अहिले नेपाल सहित भारतमा पनि बलात्कारका घटना उत्तिकैं बढीरहेका छन ।
नायक भुबन केसीकी श्रीमती अनमोल केसीकी आमाले खोजिन् दोस्रो पति !
काठमाडौ । अभिनेता भुवन केसीकी पूर्वपत्नी तथा अहिलेका स्टार अनमोल केसीकी आमा सुस्मिता बोम्जन (केसी)
शाहरुख खानकी छोरी र अमिताभ बच्चनका नातिबीच यस्तो गहिरो कनेक्सन’
एजेन्सी । बलिउडमा आउनुभन्दा अगाडि नै शाहरुख खानकी छोरी सुहाना मिडियामा छाइरहेकी छन् । भर्खर
इरानले सैनिक परेड आक्रमणको दोष कसलाई लगायो
एएफसी यु–१६ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल र मलेसियाबीचको खेल बराबरी
नेकपा जिल्ला तहको एकीकरण जिम्मा प्रदेशलाई [ विशेष परिपत्रसहित ]